Vaovao - Ny niandohan'ny kodiarana varavarana
Ny niandohan'ny kodiarana varavarana
Ny niandohan'ny kodiarana varavarana：
Araka ny General History of the World, niseho voalohany tany Mesopotamia ny kodiarana, ary tany Chine dia nisy kodiarana niseho tamin'ny taona 1500 talohan'i JK. Amin'ny alàlan'ny familiana ny kodiarana, ny fikororohana amin'ny tontolon'ny fifandraisana dia azo ahena be, ary ireo zavatra mavesatra dia azo afindra mora foana amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa, mampihena ny vidin'ny asa.
Ny fametrahana kodiarana amin'ny varavarana dia fandraisana andraikitra lehibe. Avy any Sina ny kodiarana varavarana ary niitatra hatrany Korea, Japon ary firenena hafa miaraka amin'ny kolontsaina sinoa. Amin'ny sary hosodoko sinoa sasany dia hita ny varavarana mihetsiketsika miparitaka, toy ny sary hosodoko tamin'ny Fanjakan'ny Song, misy varavarana misosa.
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19, ny Stephenson anglisy dia namokatra lamasinina voalohany manerantany. Ny fisian'ny fiaran-dalamby dia nampiroborobo ny famoronana lalamby sy kodiarana misy flanges. Ny kodiaran-dalamby misy flanges dia manampy amin'ny fisorohana ny fiaran-dalamby tsy hihosin-doha sy mihodina rehefa mihazakazaka haingana na mihodina. Ny endrik'ity kodiarana fiaran-dalamby ity dia nampiharina taty aorianakodiarana varavarana.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-20, ny fangatahana kodiarana varavarananitombo. Na izany aza, talohan'ny 2002, dia saika tsy nisy mpanamboatra kodiarana varavarana matihanina intsony ao Shina, ary ny tsenan'ny kodia varavarana dia nohazonin'ireo marika vahiny toa an'i Taiwan, Etazonia, Alemana, Japana sns. Na izany aza, tsy misy orinasa an-trano afaka mifaninana amin'izy ireo. Ireo mpamokatra eto an-toerana ny Dinggu Hardware dia nanamboatra sy namokatra kodiarana mihantona voalohany. Ny famokarana ny kodiarana varavarana na amin'ny haitao na amin'ny kalitao dia nahatratra ny haavo manerantany, ary na amin'ny lafiny sasany aza dia nihoatra izany.
Ny fitaovan'ny kodiarana manainga dia samy hafa be, ny akora akorandriaka dia misy vy vy, firaka zinc, firaka varahina, sns., Miaraka amina sary tsy misy fangarony vy, marika perla, marika mamiratra, hazavana mamiratra ary fitsaboana hafa eto an-tany.
Fitaovana amin'ny kodiarana varavarana:
Araka ny fitaovan'ny kodia varavarana,misy roller vy, roller plastika matevina, roller misy plastika, roller roller nylon fibre ary roller milina multilayer. Ny volon-koditra plastika mahazatra dia malefaka, tsy azo ampiasaina afa-tsy latsaky ny 60KG amin'ny varavarana, ny tanjaka vy, fa amin'ny fifandraisana amin'ny làlana mora hamokatra tabataba; Ny POM dia manana toetra mekanika tsara, ny fanoherana ny havizanana no avo indrindra amin'ny thermoplastic, ny modulus elastika dia tsara kokoa noho nylon 66, ABS, polycarbonate, mari-pana fampiasa betsaka. POM plastika mihosin-koditra mafy, sliding malama, mateza, zava-bita sarotra ny hifehezana, mpanamboatra an-trano vitsivitsy ihany no afaka mamokatra, amin'ny alàlan'ny roller POM matevina, ny fiakarana dia napetraka eo afovoan'ny tena vatana, ny fiarovana, ny vokadratsiny dia tsara kokoa, fa maharitra ihany koa.